at December 23, 2011 18 comments: Links to this post
at December 18, 2011 13 comments: Links to this post
1-Dec-11 ITR 50 I-BANK မေသူခိုင် maythukhine.blogspot.com
Donation for Kid who needs urgent operation in Myanmar
Rose of Sharon အလှုရှင်များသို့နောက်ဆက်တွဲသတင်း
ကလူသစ်နဲ့ အာလာပ သလ္လာပ မောင်သန်းဇော်ဦး သတင်း update
ဂျက်စတားအကြောင်းတော့ လေသံတောင် မဟချင်ဘူး၊ စိတ်နာလွန်းလို့။ စီကေအေတို့ ဘယ်နေမလဲ၊ ဟိုတိုင် ဒီတိုင်ပေါ့။ ခက်တာက အဲသလို ဘတ်ဂျက်အဲလိုင်းတွေက ဒါမျိုး ရိုး..လွန်းလို့ အရေထူနေပြီဆိုတဲ့ အထာနဲ့။ တစ်ခုပဲ Trip Advisor မှာ ကိုသောမတ်စ် (AATO) တင်ပေးတဲ့ စီကေအေတို့ ကွန်ပလိန်းစာ နဲ့ Travel Myanmar မှာတင်ပေးတဲ့ ဒီပိုစ့် ကို သူတို့ Travel Industry ကလူတွေ အကုန်ဖတ်ကြပြီးသကာလ ဂျက်စတားကို Internally အမဲရောင် စာရင်းသွင်းလိုက်သတဲ့။ ဆိုတော့ကာ Myanmar Travel Industryမှာတော့ ဂျက်စတားက ရေပန်းမစားနိူင် ရှာတော့တဲ့ အနေအထားတော့ ဖြစ်သွားတယ်။ တော်တော်လေး ပွက်သွားတယ် ဆိုရမယ်။ ဒီတော့ ကြားကြားချင်း စီကေအေတို့ " အောင်ပြီ အောင်ပြီ အောင်ပြီ" ၃ကြိမ်တိတိ လက်သီးလက်မောင်း တန်းပြီး အော်ပစ်လိုက်တယ်။ ဘာရမလဲ...။ (အမျှ အမျှ အမျှယူတော်မူကြပါကုန်)
ရင်နာနာနဲ့ ပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင် သြဂတ်စ်လထဲက ရွာပြန်ဖို့ လက်မှတ်ဖြတ်၊ သူငယ်ချင်းတွေ၊ တွေ့ဖို့ရှိတဲ့ လူတွေနဲ့ တွေ့ရအောင် အစီအစဉ်ဆွဲထားခဲ့တာ။ ဘယ်သွားမယ်၊ ဘာစားမယ် စာရင်းတို့ထား၊ စီကေအေက မေ့တတ်တယ်လေ။ ရောက်တုန်းရောက်ခိုက် စာရေးဖို့အတွက် ကုန်ကြမ်းလေးဘာလေး ရှာရအောင်...တွေးထား...၊ ဘယ်သွားရှာရရင် ကောင်းမလဲ။ အင်း...ဟိုဘလော့ဂ်ဂါလေးလို ကော်ဖီနဲ့ ဆိုင်ကယ်တွဲရောင်းတဲ့ဆိုင် သွားမလား။ ဟိုအစ်မကြီးလို ပျင်းပျင်းရှိ ဓါတ်ဆီဆိုင်သွား တန်းစီ ထုတ်ရင် ကောင်းမလား၊ စီကေအေမှာ ကားနဲ့တူတာ ဘိုအုန်းသီးတောင် မရှိပေမဲ့ပေါ့လေ။ ရွာရဲ့ လေအလျင် လိုမြန်သော၊ ဖြတ်ကနဲ ဖြတ်ကနဲ မပြောမဆို ပြုတ် ပြုတ် ကျတတ်သော အိုင်နက်ရဲ့ စပိဒ်ကို ခံစားဖို့ အင်တာနက်ဆိုင် တစ်ဆိုင်ဆိုင်ကိုပဲ သွားရကောင်းမလား။ ဒါမှမဟုတ် မင်းလမ်း မုန့်တီဆိုင်၊ ဖီးလ် မြန်မာထမင်းဆိုင်တွေက အစားအသောက်တွေ လှည့်ပတ်စားပြီး ဓါတ်ပုံရိုက်၊ ဘလော့ဂ်ပေါ် တင်ပစ်လိုက်၊ အဲလိုနည်းနဲ့ ဘလော့ဂ်ဖတ်လာ များသတ္တ၀ါတွေ ပို့သတဲ့မေတ္တာကို ခံယူရကောင်းမလား။ တွေး...တယ်။ တွေးတိုင်းလည်း မျက်နှာကြီးက ပြုံး ပြုံးကြီး...။
အတိတ်ကို လှန်သော်ပေါ့လေ...။ အိမ်ကလူနဲ့ နယ်မြေဝေခြမ်းရေးလည်း လုပ်ရသေးတယ်။ မန်းလေးမှာ ဘယ်နှညအိပ်၊ တို့များ ရန်ကုန်မှာ ဘယ်နှညအိပ်မယ်ပေါ့၊ အဲသလိုလည်း ညီညွတ် မျှတအောင်လည်း စီစဉ်ထား ရသေး။ မန်းလေးတက်ဖို့ လေယာဉ်လက်မှတ် ဖြတ်၊ ငွေပေါနေလို့တော့ မဟုတ်၊ အချိန်ကို ငွေ နဲ့ ပေးဝယ်ရတဲ့ သဘော။ မေမြို့မှာ ၂ညအိပ်ဖို့လည်း စီစဉ်ရသေးတယ်။ စလုံးက သူငယ်ချင်း မိသားစု နဲ့ မေမြို့မှာဆုံကြဖို့ ချိန်းထားကြတာလေ။ အိမ်ကလူကလည်း တက်ကြွလို့၊ သူ့ အထက်တန်းကျောင်း ဆရာကန်တော့ပွဲ၊ ဘူမိဆရာကန်တော့ပွဲ ၂ခုက တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် စနေ တနင်္ဂနွေဆက်တိုက်မို့ အဆင်တပြေ။ ခါတိုင်းလို တလစီမှာလုပ်ကြရင် ပွဲ၂ခုစလုံးတက်ဖြစ်ဖို့က ခဲယဉ်းပေတာကိုး။ ခုတော့ ကြုံပြီ ကြိုက်ပြီ ကြုံကြိုက်လေပြီပေါ့။
ဒါပေမဲ့ ကံများဆိုးချင်တော့ မင်္ဂလာဆောင်မဲ့အပါတ်မှ ၀ါထပ်နေတာလို...။ ဒီနှစ်ကျမှ ဂျက်စတားဝယ်မိတဲ့ အဖြစ်။ မက်ထားသမျှ အိပ်မက်တွေ အကုန် မြောင်းထဲစိုက်။ MAIလည်း မ၀ယ်ချင်ပါဘူး။ ကိုဂျက်စတား ဆင်တဲ့ အကွက်ထဲ မ၀င်ရေးချ မ၀င်ချင်...။ တခြားအဲလိုင်းတွေ ရှာ...။ အကုန် ဈေးတက်။ မျက်လုံးမက မျက်ဆန်ပါ ပြူးရော။ တတ်နိူင်ပါဘူး။ ဒီတနှစ်လုံး ခရီးထွက်တာများလို့ ၀ိတ်လျှော့ပါမယ် ဆိုနေမှ။ ဟူး... စိတ်တွေကို လျှော့ချ၊ ၀င်လေ ထွက်လေ ရှူ...ရှိုက်၊ အင်း...အနည်းငယ် သက်သာသွားသလိုလို...။
တနင်္ဂနွေတစ်ရက် အရမ်းအားနေတာနဲ့ လေကြောင်းလိုင်းတွေ လျှောက်ဝင်ကြည့်... မတော်တဆကြီးများ ဈေးတွေချနေမှဖြင့်...၊ မျက်လုံးတွေတောင် ပြူးလာသလိုလို ထင်ရ။ ဟာ.... မေ့နေ လိုက်တာ... အဲအေးရှား ရှိသေးတာပဲ။ ကွန်နက်တင်းဖလိုက်နဲ့ မလေးရှားက တစ်ဆင့်သွားလည်း ရတာပဲဟာ...။ အင်း...၀င်ကြည့်မှ.. ၀င်ကြည့်ဦးမှ... ။ ရောဂါ ပြန်သည်းလာပြန်...။
အွန်လိုင်းကနေ ကြည့်ရင်း သေချာချင်တော့ ဖုန်းထဆက်။ လေယာဉ်တော့ ၂စီးပြောင်းရမယ်။ SIN-KUL-SIN နဲ့ KUL-YGN-KUL လက်မှတ် ၂စောင် ဖြတ်ရမယ်။ အချိန်ပိုကုန်မယ်၊ လူ ပို ပင်ပမ်းမယ်။ သွားမလား။ ဘယ်လိုလဲပေါ့။ စီကေအေ သိပ်သွားချင်နေမှန်းသိတော့ အိမ်ကလူက စလုံးS$၁၀၀၀ မကျော်ရင် သွားကြတာပေါ့တဲ့။ အင်း... အားလုံးဘယ်လောက်ကျလဲ ဆိုတော့ S$၁၀၀၂.၄၉ တဲ့။ နိူးပရော်ဘလန် S$၂.၄၉ မိန်းမပဲ ပေးလိုက်ပါ့မယ်လေ၊ သွားကြတာပေါ့လို့ သဘောတူလိုက်ကြတယ်။ အခု ခရက်ဒစ် ကဒ်နဲ့ ပေးရမှာလားဆိုတော့ " နိူးနိူး တာမင်နယ်-1က AirAisa Sales counterမှာ ၄၈နာရီအတွင်း ငွေအကြေ သွားရောက်ပေးချေပါ"တဲ့။ ကိစ္စမရှိပါဘူးလေ၊ ဒီညနေ ဧည့်သည်ကြိုရမှာ၊ လေဆိပ်သွားဖို့ ရှိတာပဲဟာ။ ဒါနဲ့.... မြောင်းထဲကျနေတဲ့ အိပ်မက်ကြီး ကောက်ပြီး ဆက်မက်ကြပြန်တယ်။
တနင်္ဂနွေ ည ၈နာရီဝန်းကျင် တာမင်နယ်-1 AirAisa Sales counter ရှေ့။
"အိုကေ...အဲဒါက SIN-KUL-SIN နော်"
"ရက်စ် ရက်စ်"နောက် ဘွတ်ကင် တစ်ခု ရှိသေးတယ် KUL-YGN-KULလေ... (စီကေအေမှ တက်ကြွစွာ ပြော သည်)
"သြော် ၀ိတ်ထ် ၀ိတ်ထ် ၀မ်းဘိုင်ဝမ်း အိုကေ...၊ ဒါအတွက် အရင် ပေးရမယ်၊ စကာင်္ပူဒေါ်လာ 270.0ပါ"
"အိုကေ..." (အိမ်ကလူမှ ခရက်ဒစ်ကဒ် ထုတ်ပေး)
"ဟုတ်ပြီ။ နောက် ဘွတ်ကင်နံပတ် တစ်ခု ပြောပါ"
"ကျေးဇူး၊ အိုကေ ဒီ ဘွတ်ကင်က KUL-YGN-KUL နော်..."
"ဟုတ်ပါတယ်...ဟုတ်ပါတယ်..." (စီကေအေမှ မျက်လုံးများ အရောင် တလက်လက်နှင့် ပြောသည်)
"အင်း...အဲဒါက စင်္ကာပူ ဒေါ်လာ ၈၃၄.၄၉ ကျပါတယ်"
"ဘာ...အိုင် ဘက်ခ်ယူဝါ ပါဒမ်..."
"စင်္ကာပူ ဒေါ်လာ ၈၃၄.၄၉ ပါ"
"ဟင်...ငါတို့ နေ့လည်က သဘောတူထားတဲ့ ဈေးက ၇၃၂.၄၉ပါ...ဒီမှာကြည့်" (လက်ရေးနှင့် အသေအချာ ချရေးထားသော စာရွက်ကို စီကေအေမှ ပြရင်းပြော)
"အဲဒါတော့ ငါတို့လည်း မသိဘူး၊ ဈေးကတော့ အခု စစ်စတမ်မှာ ပြနေတဲ့ ဈေးပဲ"
"ဒီလို ဘယ်ရမလဲ၊ နေ့လည်ကမှ သဘောတူထားတဲ့ဟာ၊ ငါတို့ ဘွတ်ကင်ကို ၄၈နာရီ ဟိုးလ်လုပ်ထားမယ် လို့ ပြောခဲ့တာ"
"အဲဒီ အမျိုးသမီးနာမည်က Ms Anne တဲ့ call center က"
"ဒါဆို သူ့ဆီ ဖုန်းဆက်ပြီး ပြန်မေးကြည့်လိုက်ပါ"
ကြိုးစားဆက်သည်။ အဂန်း အန် အဂန်း...၊ ဖုန်းက တစ်ချိန်လုံး ဘီးဇီး....နှင့် မအား...။
"ဧည့်သည်ကြိုဖို့ လေယာဉ်ဆိုက်ချိန်က နီးပြီ၊ သွားကြစို့၊ တော်ပြီကွာ ဒီလောက် ပြသာနာ များလှတာ သွားမနေပါနဲ့တော့" (အိမ်ကလူကြီးမှ စိတ် အလွန်အမင်း ပျက်သံနှင့် ပြော)
"အိုကေ၊ ပလိစ် ကန်ဆယ် အာဝါ ဘွတ်ကင်" (စီကေအေမှ ရင်ထုမနာ ပြော၏)
ဘတ်ဂျက်အဲလိုင်းများနှင့် အကျိုး လုံးလုံးမပေးသော ကိုယ့်ကုသိုလ်ကံကိုပဲ ပုံချ။
ဧည့်သည်ကြို၊ အတင်း ကြိုးစား ပြုံးပြ၊ အပြုံးမမည်...၊ မချိသွားဖြဲ...။
ည...အိပ်မပျော်...။ မနက် ဧည့်သည် မနက်စာကျွေးဖို့ စောစောထ။ ဘ၀ကြီးက ကြမ်း...။
မနက်စာစားပြီး ခဏအကြာ...။ အီးမေးလ် စစ်။ ဟာ..."၀ီအာပလိစ်တူ ကွန်ဖမ်း ယူဝါဘွတ်ကင်...အဲအေးရှား" ဆိုပါလား...ကြည့်လိုက်တော့ SIN-KUL-SIN ဘွတ်ကင်တစ်ခုထဲအတွက် လေယာဉ်လက်မှတ် ပို့လိုက်ခြင်း...။
ပြန်စဉ်းစားတော့မှ၊ ဟုတ်ပေသားပဲ။ ၀မ်းဘိုင် ၀မ်း ဆိုပြီး ပထမဘွတ်ကင်အတွက် ခရက်ဒစ်ကဒ်ထဲက ယူလိုက်ပြီးသားကိုး...။
ကန်ဆယ် အာဝါ ဘွတ်ကင်လို့ ပြောပေမဲ့ အဲဒီအချိန်မှာ ခရက်ဒစ်ကဒ်ဖြတ်ပြီးသား။ လောလော လောလောနဲ့ void မှ ပြန်မလုပ်ခဲ့တာ။ မြွေပဲ...။
အဲအေးရှားကို ချက်ချင်း ဖုန်းဆက်၊ အကျိုး အကြောင်း ရှင်းပြ။ ဟိုဘက်က အမျိုးကောင်းသား အလွန် သဘောကောင်း။ ဒါ သူတို့ဘက်က အမှားပါ။ သဘောတူထားတဲ့ ဈေးအတိုင်းပဲ ပြန်ယူပါတဲ့....။
မျှော်လင့်ချက်တွေ တစ်ပတ် လည်လာပြန်ပေါ့...။ အိမ်ကလူကို ဖုန်းဆက်။ ဘယ်လိုလဲ ယူလိုက်မလား၊ ယူလိုက်ရမလားမေး..။
"တော်ပါပြီကွာ...ဒီလောက် စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်ရတဲ့ ခရီး မသွားတာပဲ ကောင်းပါတယ်။ ပြောလိုက် ရီဖန်းပဲ ပြန်ထုတ်ပေးလို့..."
ဖုန်းချတာ မဟုတ်...စီကေအေ အသဲ ကျကွဲသွားခြင်း...
စဉ်းစားကြည့်ပါ ပရိတ်သတ်ကြီးရယ်...၂ခါ ကွဲတဲ့ အသဲ မနာဘဲ နေပါ့မလားနော်....
မေတ္တာပို့ : ၇ရက် သားသမီးများ အသဲကွဲခြင်းမှ ကင်းဝေးကြပါစေ။ ဘတ်ဂျက်အဲများ ကျန်းမာကြပါစေ...
at November 28, 2011 24 comments: Links to this post
ခေတ်မီသွားတယ်ပဲ ဆိုချင်ဆို ထီကနဲဖြစ်ပြီဟေ့ဆို ချစ်ကြည်အေးတို့လည်း မပါမဖြစ် ပါလိုက်ရမှ။ ပြောရရင် ခုတစ်လော စိတ်မအား လူမအားရတဲ့ကြားထဲ ပျားတုတ်ခံရတဲ့အဖြစ်ရယ်။ တော်တော်လေး ရင်ခံ သွားတယ်။ သိပြီးသူတွေလည်း ရှိကောင်းရှိမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ မသိသေးတဲ့သူတွေက ပိုများတဲ့အတွက်၊ ပြီးတော့ ဒါဟာ အိမ်ကိုလွမ်းနေကြတဲ့၊ အိမ်ပြန်ဖို့ ပြင်နေကြတဲ့ မြန်မာများအားလုံး သိကိုသိထားရမယ်လို့ ယုံကြည်တဲ့အတွက် ဒီပိုစ့်ကို ရေးလိုက်ရပါတယ်။
ပြီးခဲ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ (၁၆-၁၁-၁၁)က ဂျက်စတားက တာဝန်ခံတစ်ယောက် အိမ်ကလူဆီ ဖုန်းဆက်လာပါတယ်။ ကိစ္စက နောက်လ ဒီဇင်ဘာအတွက် ၀ယ်ထားတဲ့လေယာဉ်လက်မှတ်ကို အပြန် ရက်ချိန်းပေးနိူင်မလား လို့ မေးလာတာပါ။ အိမ်ကလူက မဖြစ်နိူင်လောက်တဲ့အကြောင်း၊ ခွင့်တွေကအစ အကုန်စီစဉ်ပြီးဖြစ်နေတဲ့ အကြောင်း ပြောပြပါတယ်။ ဂျက်စတားကလူက သူတို့ရက်ရွေ့တဲ့အတိုင်း လက်ခံရင် တစ်ယောက်ကို ၁၀၀တန် ဘောက်ချာ၂စောင်နဲ့ ၂ယောက်စာ (စလုံး) ၄၀၀တန် ဘောက်ချာလည်း offerပေးဦးမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဲဒီမှာ အားနာတတ် တဲ့အိမ်ကလူက ယတိပြတ်မငြင်းလိုက်ဘဲ မိန်းမနဲ့ တိုင်ပင်လိုက်ဦးမယ်ကွာ လို့ ပြောခဲ့သတဲ့ရှင်။ ဟိုလူက လည်း ငါ့ရဲ့ offerကို မင်းဆီ e-mailပို့ပေးမယ် ဆိုခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီနေ့က အိမ်ရောက်လို့ ညစာစားကြပြီး e-mail စစ်ကြည့်မှ မျက်လုံးပြူးကြရတယ်။ လား လား သကောင့်သားက ကျွန်မတို့ သဘောတူညီချက်မရသေးဘဲ လေယာဉ်လက်မှတ်ကို ရက်ပြောင်းပြီး ပို့ လိုက်တော့တာလေ။ အသွားရက်ကိုတော့ မပြောင်းပါဘူး။ ပြန်လာမဲ့ရက်ကို ပြောင်းထားတာပါ။ ကျွန်မတို့ မူလအစီအစဉ်အရ ဒီဇင်ဘာ ၃၀ရက်နေ့ စလုံး ပြန်လာဖို့ ရက်ချိတ်ထားတာကို ၁လပိုင်း ၁၃ရက် အထိ နှစ်ပတ်ခွာပြီး နောက်ဆုတ်ထားတာကိုး။ ဒါ ဘယ်လိုမှ လက်မခံနိူင်စရာပါ။ ဒါနဲ့ ဂျက်စတားကို ချက်ချင်း ဖုန်းဆက်ပါတယ်။
ကျွန်မတို့ အရင်က ၀ယ်ထားတဲ့ရက်အတိုင်း ပြန်ပြောင်းပေးဖို့ ပြောပေမဲ့ မရခဲ့ပါဘူး။ နောက်ဆုံးတော့ ရွေး ချယ်ဖို့ ၂လမ်းပဲ ရှိတဲ့ အကြောင်း၊ သူတို့ပြောင်းပေးတဲ့ရက်အတိုင်းသွားပြီး Jetstarကပေးတဲ့ Travel Voucher၂၀၀ တန်ယူမလား၊ ဒါမှမဟုတ် လက်မှတ်ဖိုးပြန်အမ်းတာ ယူမလား အဲဒီနှစ်ခုထဲက တစ်ခု ကြိုက်ရာရွေးဖို့ ပြောင်ပြောင်ပဲ ပြောလာ ပါတော့တယ်။ နှစ်ခုလုံး မရွေးနိူင်ဘူး၊ ငါတို့သဘောမတူဘဲနဲ့ ပြောင်းထားတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် လုံးဝ လက်မခံနိူင်ဘူး။ ငါတို့ ၀ယ်ထားတဲ့ ရက်အတိုင်းပြန်ပြောင်းပေးပါလို့ အကြိမ်ကြိမ် ပြောတယ်။ မရခဲ့ပါဘူး။
ဒီလို ဘာ့ကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲလို့ ကျွန်မက မေးတဲ့အခါ လက်မှတ် oversold ဖြစ်သွားလို့ပါတဲ့လေ။ ဘယ်လောက် ရယ်စရာကောင်းတဲ့ အကြောင်းပြချက်လဲ။ seat availability နဲ့ ရောင်းတာ မဟုတ်လား။ computerized system နဲ့ ရောင်းကြတာမဟုတ်လား။ ပြီးတော့ ဒီဇင်ဘာပြန်ဖို့ကို သြဂတ်စ်လထဲက ၀ယ် ထားခဲ့တာမို့ ဒါဟာ ဘယ်လိုမှ သည်းခံနိူင်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။
ပြောရင်းနဲ့ ကျွန်မလည်း တော်တော်လေး စိတ်တိုလာပြီး ၃-၄ ကြိမ်လောက် ဖုန်းဆက်ပြီး မေးပါတယ်။ အားလုံး တစ်သံတည်းထွက်ကြပါတယ်။ ဒါနဲ့ နောက်ဆုံးပြောဖြစ်တဲ့ အမျိုးသားက အွန်လိုင်း feed back ဖောင်ဖြည့်ပြီးတင်ပါလို့ အကြံပေးပါတယ်။ ကျွန်မကလည်း ချက်ချင်းပဲ ဖြည့်တင်လိုက်ပါတယ်။
နောက်တော့ သတိရတာနဲ့ အဲဒီနေ့ ပတ်ဝန်းကျင် ပြန်လာဖို့ စီစဉ်ထားကြတဲ့ မိတ်ဆွေတွေဆီ ဆက်သွယ် ကြည့်တော့ သူတို့လည်း တူတူပဲ၊ သဘောတူညီမှုမရဘဲ return ticketကို Jetstarက နောက်နှစ် ပတ်ရွှေ့တာ ခံရတယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။ ပိုဆိုးတာက သူတို့က ၁၉ရက်နေ့ ပြန်ကြမှာပါ။ စဉ်းစားသာကြည့်ပါတော့၊ ၁၉ရက်နေ့ပြန်မဲ့ဟာကို last minuteမှ (၁၆ရက်နေ့မှ) သူတို့ return ticket နောက်နှစ်ပတ်ရွှေ့ခံရတာ သိရတဲ့ ဘ၀။ တော်တော်လေးကို ဆိုးပါတယ်။ Customerကို ဂရုမစိုက်ဘဲ လုပ်ချင်ရာ လုပ်တဲ့ ဂျက်စတား။ အင်မတန် သိက္ခာမဲ့တဲ့ လုပ်ရပ်ပါ။
ဘယ်လိုမှ စဉ်းစားချိန်မရတော့တဲ့ မိတ်ဆွေ မိသားစုကတော့ အပြန်တစ်ခြမ်းအတွက် Jetstarကနေ Refund ထုတ်ပြီး MAIဆီက အပြန်တစ်ကြောင်းအတွက် တစ်ယောက်ကို $၃၇၀ပေးပြီး ၃ယောက်စာ S$တစ်ထောင်ကျော် ပေးဝယ်သွားကြ ရပါတယ်။ Jetstarက တစ်ကြောင်းအတွက် ၃ယောက်စာ ပြန်အမ်းငွေက $၄၀၀ ကျော်ထဲပါ...ဟူးးး
ဘယ်လိုပဲ လက်မှတ်ဖိုးပြန်ပေးတယ်ပဲ ပြောပြော၊ ခုချိန်မှာ လေယာဉ်လက်မှတ်ဈေးတွေက အရမ်းမြင့်နေ ပါပြီ။ သြဂတ်စ်လ ကျွန်မတို့ဝယ်တုန်းက နှစ်ယောက်ပေါင်းမှ စလုံး ၆၀၀ ကျော်ရယ်။ ခုဆို ၁၀၀၀ကျော်လောက်ရှိတဲ့အပြင် ကိုယ်လိုချင်တဲ့ရက်လည်း ရချင်မှ ရတော့မှာပါ။ ၁၇ရက်နေ့က Jetstarကို ကျွန်မ ဖုန်းဆက်ကြည့်တော့ ကျွန်မတို့ကို လက်မှတ်ရောင်းတုန်းက Big aircraft ခု small aircraftကို ဒေါင်း ဂရိတ်လုပ်တာမို့ ခုလိုဖြစ်ရတာပါလို့ ဖြေရှင်းချက် ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ အကြောင်းပြချက်တွေက ခုတစ်မျိုး တော်ကြာတစ်မျိုးနဲ့ ဂျက်စတားပါ။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့ထုတ်ရောင်းထားတဲ့ လက်မှတ်တန်ဖိုးကို သူတို့ တာဝန်ယူရမှာပေါ့။ Confirmed ticket တစ်စောင်ရဲ့ တန်ဘိုးကို သူတို့ ထည့်တွက်ရမှာပေါ့။ ခုတော့ နဲနဲမှ သိက္ခာမရှိတဲ့ လုပ်ရပ်ကို ရွေးချယ်ကြတယ်။ လေကြောင်းလိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့ နာမည်ပျက်တာလောက် ဘာကများ ဆိုးဦးမလဲရှင်။ သေချာတယ်လေ၊ Jetstarက လက်မှတ်ဘိုးအပြည့်ပြန်ထုတ်ပေးတယ်ပဲထား။ ခုလက်ရှိပေါက်ဈေးနဲ့ဆို အိတ်ထဲက တစ်စောင်ကို $၂၀၀ နီးပါးစိုက်ဝယ်ရတော့မှာပါ။
နောက်ထပ်သေချာ တာတစ်ခုက အားလုံးလိုလိုဟာ Jetstarကနေ MAIကို ပြေးပြီး လက်ရှိပေါက်ဈေး နဲ့ ပေးဝယ်ကြတော့မှာပါ။ Jetstar နဲ့ MAI ဟာ အကျိုးတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည် ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာသာ ရှိနေရင် Jetstarရဲ့ အခုလုပ်ရပ်ဟာ ဘာကို ရည်ရွယ်တယ် ဆိုတာ ပြောနေစရာတောင် မလိုတော့ဘူးပေါ့ရှင်။
ကျွန်မတို့ မြန်မာလူမျိုးတွေက အားနာတတ်တယ်။ နေပါစေတော့ကွာဆိုပြီး အေးအေးနေတတ်ကြတယ်။ တစ်ချို့ကျတော့လည်း ဘာလုပ်ရမှန်း မသိကြဘူး။ ဘာမှလုပ်လို့ ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး လို့လည်း တွေးတတ်ကြတယ်။ နဲနဲလေးလောက်တော့ လုပ်ကြည့်ကြစေချင်ပါတယ်။ ဒါဟာ လူပါးဝလွန်းတာပါ။ စော်ကားလွန်းတာပါ။ Customerကို တန်ဘိုးမထားတဲ့ လုပ်ရပ်ပါ။ လုံးလုံးမတရားတဲ့ လုပ်ရပ်ပါ။ အေးရာအေးကြောင်း ငြိမ်မနေကြပါနဲ့။ လုပ်လို့ရတာလေးတွေ လုပ်ကြည့်ကြရအောင်ပါ။ အားလုံး လူညီကြဖို့ပဲ လိုပါတယ်။
၁) http://www.case.org.sg/ မှာ သွားတိုင်ပါ။ Document အပြည့်အစုံနဲ့ Monday-Saturday 9-4pmပါ။
၂) ဂျက်စတားရဲ့ FB စာမျက်နှာhttp://www.facebook.com/pages/Jetstar-Asia/31975232581 မှာ wall post သွားရေးပါ။
၃) အားလုံးစုပြီး Mediaထိပေါက်အောင် သွားလို့ ရပါတယ်။ သူတို့ လက်မှတ်ဘိုး ပြန်အမ်းတာကို လွယ်လွယ် လက်မခံကြပါနဲ့ဦး
၄)ကျွန်မရဲ့ ကော်မန့်မှာ ဂျက်စတားလက်မှတ်ဝယ်တုန်းက Booking Ref. နံပါတ်လေးတွေ ရေးပေးသွားကြ ပါ။
လုံးဝ အလျှော့မပေးပါနဲ့။ မသိသေးတဲ့သူတွေကိုလည်း တစ်ဆင့်စကားပါးလိုက်ကြပါ။ Westerner တွေကို သူတို့ မလုပ်ရဲပါဘူး။ စင်ကာပူရီယန်တွေကို သူတို့ မလုပ်ရဲပါဘူး။ မြန်မာတွေမို့ ရမလားလို့ အကဲစမ်း ကြည့်တာပါ။ ဒါဟာ လူမျိုးရေးပါ ပါပါတယ်။ ဒီကိစ္စဟာ ပေါ့သေးသေးမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်မကတော့ ဂျက်စတားကို သပိတ်မှောက်ပါတယ်။ နောင်ကို ဘယ်တော့မှ ဂျက်စတား မစီးတော့ပါ။
***ဂျက်စတား ဖဘက ကူးလာတာပါ။
Amy Soe I really upset to travel with Jetstar and I'm regret to choose Jetstar. I had madeabooking and madeapayment since August for my flight. Today last minute call me and cancel my ticket due to too loaded on 30 Dec and ask me to change to 21 dec or 13 Jan. I already madeaappoinment and prepare my trip. Last minute call me and offer me either to changeadate or getarefund. At this time I can't buy any other airline all are fully book. If inform me early I still can choose other airline. And my best friend wedding on 25 Dec so how am i goiing to atten. If my wedding on that day how they going to settle on it. And when I call customer service officer different people answer me different reason. Not easy to apply my leave again do you concern for that Jetstar.
Florence Aung Attention: CEO (Jetstar)
I am very disappointed with the way the jetstar works. I have bought return tickets for two from singapore to yangon on sept 08 2011 ( dept on 24 dec 2011 and arrival on7Jan 2011).
Today, I was informed there is no flight from Yangon to Singapore on the7Jan 2011 by Jetstar staff and offered me 11 jan 2011 (wed) instead. That is totally unacceptable for me since I have to plan many things eg:leave applications( It is not so easy at all for us to extend leaves) and many other things needed for this leave for approval.Though i was told there was no flight returning from Yangon to Singapore ( during 26 Dec 2011--10 Jan 2012) ( you can check the recording for telephone conversation made( 9:30am to 10:45am 17-Nov-2011) that i call your3staffs, one of them say no flight, another one hang up the phone during conversation( his name Max or something like that) and last one--not bad in my opinion). I know there isaflight on the 7th January 2012 from Yangon to Singapore in the morning arrival 10:25am Yangon. My schedule flight from yangon to singapore is 11:25am on January72012.
There is no logic if there is no flight at 11:25am on January72012. I feel I am being cheated by some unfair policy( may be to make more money).I am offered to options- one ( to get fully refund) and another one to either get refund for return only or accept the return date on 11 Jan (wednesday) 2012 and get 200S$ dollar voucher for each affected person- for my case 2persons). Both options are unacceptable for me knowing that there isaflight from Yangon to Singapore on Jan72012 which I have booked and confirmed tickets since September 8). Come to think or it for yourselves, If you were in my position, will you be pleased with what the jetsar is doing to me and affected customers? My holidays is already spoilt by this unethical way of making money.
I sincerely request that please put me and my wife on Jan72012 flight from Yangon to singapore in order for me to believe that the jetstar is deserved to be my first choice airline.
You have already committed on this offer by accepting ticket fare from customer,you should be responsible for it.
Await your soonest positive reply and responsible action on this case.
Yesterday at 1:22pm · · 7
Win Min Lin jet star post box accept only good comments .. lol ...
Yesterday at 1:57pm · · 1
Florence Aung Yes, excectly. I cannot post my comments on Jetstar's Wall page
Amy Soe The ticket which I bought since August. Now they told me oversold and my flight cancel. That mean they r not work properly since August now they know oversold? Now ask to refund or changeadate, So easy for them to say that. If they tell me in Sep I still can choose other airline. Now I already arrange and tell me all stupid reason.
18 hours ago · · 1
Khin Saw Htwe me too, I bought ticket since August , they gave same reason and ask to refund or change date which too far from my return ticket date , they are cheating on us , we got it in offer fare rate , i think they sold back higher rate to the other and simply say that oversold and flight cancel .I have never seen other air line in this kind of stupid reason ,we have to let other people to aware of this case... BE AWARE DO NOT BOOK ON LINE ,,, WILL BE CHEATED BY JETSTAR
17 hours ago · · 1
Naing Aye Latt We are facing the same treatment from Jetstar and that's so unacceptable as customers who are holding confirmed tickets issued by Jetsrar. They must do something like arranging additional flight or compensate air fare according to current price from other airline as now the tickets price is sky-high. We have already been arranged accommodation and domestic flight at destination as well. Who will take responsibility for all that charges incurred? Definitely Jetstar jeopardizes my holiday plan and we should make awareness of such Jet stars's' attitude to people.
Naing Aye Latt Even if Jetstar compensates air fare according to current price from other airline, too late , not secure to getaseat already as our initial planning date. Hence, only one option to let us get on board Jetstar !!
Zaw Zaw Cho Everybody, Jetstar just cheat to her customers. Not only you, there are so many people who have booked on these high peak season. Jetstar sold withapromotion price, but now the price is flying high for these days. So, Jetstar just omit your seat only. Pls, carefully check from any possible sources of information as much as you can, there is no any flight will be cancelled on these scheduled dates. Just omit your seats only. Make sense. How dare to cheat like that in Singapore. Now, I am arranging to disclose those cheat cases to Ministry of Transport (Singapore), CAAS (Singapore), some news agency in Singapore, Yahoo News, Straits Time, etc. Also, I am arranging to send those information to all Journals in Myanmar. I will inform all updates time by time again.
2 hours ago · · 6
Michael Maung Mra U What I can confirm now is JETSTAR cancelled some tickets only. 100% sure that not all the passengers for the same flight are affected. We should gather more information and share one another.
2 hours ago · · 2
Zaw Zaw Cho Pls, everybody, log and claim to Civil Aviation Authority of Singapore, CAAS at qsm@caas.gov.sg, ph: 6542 1122, and Consumer's Association of Singapore, CASE at sayit@case.org.sg. Also, pls, inform to any journals in Myanmar.
Michael Maung Mra U There is some responce from JETSTAR Australia side about our complaint, Just sharing and will update outcome to all later
Wendy Min I have already checked with Jetstar staff. She said they changed small cargo and they shift return date from Yangon (from 4/1/12 to 11/4/12) only for 15 female passengers and flight is not cancel. But my brother also received call and emails same as me. They just give reason anyhow. I found most people bought tickets around August which is normal price rate.
Jet Star : Are you try to create disappointed all passengers who bought with normal price? If people accept refund; are you planning to sell with high price to new passenger as this is hot period?
I print this Facebook page as I know they delete all complains very soon. Don’t keep quiet. We cannot accept such cheating case in Singapore.
You can complain to below. More complain can made legal faster action.
Ministry of Transport (Singapore)- http://app.mot.gov.sg/Contact_Us.aspx,
Consumer Association of Singapore http://www.case.org.sg/,
Singapore Authorize PIC : Kindly please don’t keep quiet. Singapore isalawful country. Please arrange to settle this chatting case which is fully related to your National Identity. We want to be proud citizen of Singapore.
Jill Powers ‎24 hours latter STILL NO EMAILS!!!!!!!!
Stella Kwa where's my voucher? already 15days later.. and yet my fren whom is later then me.. already got the voucher.. why no dates is given to me for the dateline? why always the same old reply to my answer whenver i call.. i need to book my vacation soon.. and yet voucher is not here... WHY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! so piss n disappointed with the service given.. kinda regret to choose jetstar... damn piss off........
Zaw Zaw Cho According from all information for the time being, most of the Myanmar people who bought the tickets on about Aug 2011 are affected. Beside this, there is not any contact person and office in Singapore, except at Terminal 1. I will update accordingly.
Henry Cheng Shame on you Jetstar on dishonest action on your customers. I suggest you to solve those complains legally and rightfully or you will be notorious in this region. I amastrong customer of Jetstar but next time I need to think twice to choose you.10 minutes ago · · 1
Aung Hein Minn I bought the tickets from Jetstar as well. Hopefully, my tickets will not be cancelled by Jetstar.
Chan Min Where is "customer right"?
Stella Kwa where's my voucher... oh my god.. i lodge complain to the web.. but like no use.. arghh.. i wan my vacation.. damn
Wendy Min share this information to all of your friends to prevent for future...
Phoe Lone I never fly JS or either MAI before, but coming CNY I bought TK to YGN.wish everything smooth. :(
Wendy Min I have already written and share this information on the wall of Air Asia, Silkair, Lufthesa, Myanmar Air Way International, etc.,
Zaw Zaw Cho Pl, do not take any refund. Jetstar is just cheating us. Pl, unite. I will doalegal action to jetstar on soon after contact to Singapore Police Force. I will update my plan accordingly.
27 minutes ago · 1
CAASကို တိုင်ထားပါတယ်။ ကိုဇော်ဇော်ချိုဆီက ဖောမက်ယူပြီး ပို့လိုက်ပါတယ်။
We would like to complain about below serious cheat case matter from Jetstar Airline in Singapore.
We have bought online air tickets from Jetstar for Singapore – Yangon – Singapore, booking ref: E7KEKZ, since 25 Aug, 2011. According to the itinerary, our return flight, YGN – SIN, will be at 11:25am-3:50pm on 30 Dec'2011. (Please refer attach file JS Tickets-Purchased)
However, we hadacall from Jetstar and said that our return flight schedule date will be changed to 13 Jan'2012 instead of 30 Dec 2011 according to their new itinerary. (Attachment file. 2-JS Ticket-Changed)
Refer to tele-conversation with Jetstar Officers, we have surprisingly acknowledged that our original flight program, YGN – SIN, 30 Dec, 2011 is not cancelled, but just only our seats are not available anymore on that flight and said it has being oversold. They just simply say either to take the refund or go according to their new itinerary assigned date then getaS$200 vouchers from Jetstar as compensation. Sadly we cant take both options offered by Jetstar.
As everybody known that our return date is on high peak season and now surely cannot secure the ticket on that date. Even if we can get it, the fare will be surely sky high at least2times than our Jetstar ticket. So,we have no reason to take the refund from Jetstar in anyway. Definitely, Jetstar also knows these consequences and therefore purposely omitted our seats and given it to other customers who may payacurrent higher fare for this time being. We feel that is solely cheated case for us as everybody can sense it very obviously. It is totally unfair.
Therefore, We seriously complain about Jetstar’s unprofessional attitudes and dispute manners which are really happened in one of the lawfully countries, Singpore. If it is not happened to us and it just heard about from other, we really won't believe as it is in Singapore.
Beside this, according to our tight working schedules, leave matter, travel plans, etc, there is totally impossible to extend our return date to another2weeks. We must have to arrive back to Singapore and report to work on 30 Dec 2011 if there are no other unforeseen and unavoidable reasons.
As customers who are holding confirmed tickets issued by Jetstar since 25Aug 2011, we feel nasty cheating by Jetstar badly. Hence, if Jetstar cannot locate our seat inflight on 30 Dec 2011, somehow they have to arrange YGN – SIN air-tickets in any possible way with their own expenses.
ဘယ်သူမဆို ကျွန်မဆီက ကော်ပီကူးပြီး ကိုယ့်အချက်အလက်တွေ ထည့်ပို့ချင်ရင်လည်း ရပါတယ်ရှင်။ ပို့ရမယ့် လိပ်စာက qsm@caas.gov.sg ပါ။
ဒါကတော့ CAASက ပြန်စာပါ။
We are sorry to learn about your unpleasant experience regarding the cancellation of your return flight.
We have forwarded your email to Jetstar Asia to look into your feedback. They will be responding to you soon. Should you require further assistance, you may contact Jetstar Asia's call centre for assistance at 800 6161 977.
Cheng Suat Guek (Ms)
for CAAS QUALITY SERVICE MANAGER
Tel (65) 1800 542 3366 Fax (65) 6542 1231 Email qsm@caas.gov.sg
ဂျက်စတားကလည်း ကျွန်မဆီ စာပြန်လာပါတယ်။ ဒီကိစ္စကို သူတို့ ဖြေရှင်းပေးပါမယ်။ နောက်ထပ် Business days ၁၅ရက်စောင့်ပေးပါတဲ့။
Thank you for letting us know about your Jetstar experience.
We do apologise for the delay in acknowledging your feedback. This email is confirmation that we are in receipt of your feedback.
Please allow at least 15 business days foraresponse from one of our Customer Care analysts. If your feedback or query relates to imminent travel (within 72 hours), please contact our Customer Relationships team on 131 538 and our Telephone Reservations team will request one of our analysts to call you.
Thanks again for contacting us. To help us identify and respond to this specific issue, please clearly quote your Case ID (CAS-530891-9VFHTS ) in any correspondence.
The Jetstar Customer Care Team
ကျွန်မ လက်မခံနိူင်ပါဘူး။ Business days ၁၅ရက်ဆိုတာ ၃ပတ်တိတိပါ။ ဒါကြောင့် နိူဝင်ဘာ လကုန်ထိပဲ စောင့်နိူင်မယ်။ ဖြေရှင်းပေးပါ လို့ ထပ်ပြီးတောင်းဆိုထားပါတယ်။ Media တွေ အထိပေါက်ဖို့ ကိုလည်း ဆက်လုပ်ပါဦးမယ်။ အွန်လိုင်းမီဒီယာတွေကနေ တစ်ဆင့် ဖြစ်ချင် ဖြစ်ပါမယ်။ တစ်ခုခု အကြောင်း ထူးရင် ထပ်ပြောပါဦးမယ်ရှင်။
ကျွန်မတို့ လက်မခံနိူင်ဘူး ပြောတဲ့ကြားကပဲ Jetstar က Travel Voucher ၂၀၀ တန် e-mail ကတစ်ဆင့် ပို့လာပါတယ်။ Travel Voucherက ၂၁ နိူဝင်ဘာနေ့စွဲဖြစ်ပြီး ၃လ သက်တမ်းပါ။ တစ်နှစ်အတွင်း ခရီးသွားရမှာပါ။ ကျွန်မ လက်မခံနိူင်တဲ့အကြောင်း online feedbackကတစ်ဆင့် စာပြန်ရေးထားပါတယ်။
at November 18, 2011 33 comments: Links to this post